မာန – Min Thayt
“ဂျူးက သူ့ဘဝမှာ မထားလိုက်ရတဲ့ မာနတွေအားလုံးကို ခင်မိုးမြင့်အပေါ်ကို ပုံအောပစ်ချလိုက်ပုံရတယ်”
တကယ်တော့ အချစ်ဝတ္ထုများသည် ကျွန်တော်နှင့် ဘာမျှ မဆိုင်။ ဘုန်းကြီးနှင့် ဘီးကဲ့သို့ မအပ်စပ်သော အရာ များဟုပင် ကျွန်တော် ကာလအတော်ကြာယူဆထားခဲ့ဖူးသည်။ တကယ်တော့ “မိုး” သည် ကျွန်တော် စတုတ္ထ မြောက် ဖတ်သည့် ဂျူး ဝတ္ထုသာဖြစ်သည်။ ပထမက “တိမ်နဲ့ချီတဲ့ကြိုး”၊ ဒုတိယက “မြစ်တို့၏မာယာ”၊ တတိယ က “မိန်းမတစ်ယောက်၏ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်”၊ စတုတ္ထကမှ “မရှိမဖြစ် မိုး”။
တကယ်တော့ “မိုး” ဝတ္ထတစ်အုပ်လုံးကို ကျွန်တော် နေရာ တိုင်းတွေ့ရသည်မှာ “မာန” သာဖြစ်သည်။ မာနနှင့် ပက်သက် ၍ ကျွန်တော် သိပ်များများစားစား မသိ။ ကျွန်တော် သိသည် မှာ၊ ကျွန်တော် ကိုယ်တွင်းက ကျွန်တော့် မာနနှင့် ကျွန်တော် လေ့လာကြည့်ဖူးသည့် အမျိုးသမီးတချို့၏ မာန အကြောင်း သာဖြစ်သည်။
ရတနာပုံတက္ကသိုလ်တွင်၊ ဟောပြောပွဲလုပ်ရန် “ဂျူး” က ကျွန်တော်တို့ လူငယ် တစ်သိုက်နှင့်ဆုံသောအခါတုန်း က၊ ဂျူးကို သူ့ဝတ္ထုထဲက ဇာတ်ကောင်တွေအကြောင်းနှင့် ပက်သက်၍မေးကြည့်ဖူးသည်။ “ဂျူး” က၊ “ကျွန်မ ခင်မိုးမြင့်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ… သူ့လို ကျွန်မ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး…” ဆိုပြီး ပြောခဲ့ဖူးသည်။ အဲ့ဒီ့နောက်ပိုင်း ခင်မိုးမြင့် ကို ကျွန်တော် ဝတ္ထုထဲမှ သူ့စရိုက်ကို သတိထား ရှာကြည့်ခဲ့သည်။ မိန်းမနှင့် မာန အကြောင်းကို ကျွန်တော် အတော်အတန် ခံစားလိုက်မိသည်။
တစ်ဖက်မှာလည်း၊ “အင်မတန် မာနကြီးလွန်းတဲ့ မိန်းမတွေ၊ အိမ်ထောင်မကျတာ… မဆန်းပါဘူး…” ဟုလည်း စိတ်ထဲက ဘုတောကြည့်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲတွင်၊ အချစ်၊ မာနနှင့် လက်ထပ်မှုအနုပညာတို့ အကြောင်း နှင့်ပက်သက်သော ယူဆချက်၊ အမြင်များ ရောပြွမ်းဝင်လာသည်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဘာမှ လောက်လောက်လားလား မသိ။ အထင်အမြင်များဖြင့်သာ၊ တွေးတော၊ ယူဆ၊ ကောက်ချက်ပြုခဲ့သည်များသာ များသည်။
ဝတ္ထုထဲမှာ၊ ခင်မိုးမြင့်၏ စွမ်းရည်များကို မြင်ရသည်။ ထို့နောက်၊ ခင်မိုးမြင့်၏ မာန။ ထို့နောက် ခင်မိုးမြင့်၏ လိမ်လည်မှု။ ဤအချက်သည် ကျွန်တော့်၏ အတ္တနောမတိ ကောက်ချက်သာဖြစ်သည်။
ခင်မိုးမြင့်က မာနအတွက် သူ့ကိုယ်သူ လိမ်သည်။ နောက်ဆုံး အတ္တဗဟိုပြုချက်ဖြင့် အချစ်ကို ပုံဖျက်ပစ်လိုက် သည်။ နောက်ဆုံး ခံစားရသည်က သူပင် မဟုတ်လား။ ခင်မိုးမြင့်ကဲ့သို့သော မိန်းမများသည် ဤသို့ခံစားရသည် ကိုပင် နှစ်ခြိုက်တတ်သော သဘာဝရှိသည်လား မပြောတတ်။
လရောင်ရဲ့ ဖြားယောင်းမှုကြောင့် အနီးကပ်ဆုံး
ယောက်ျားတစ်ယောက်အပေါ် စိတ်ကစားမိတဲ့ အဖြစ်ကို
ညက ကိစ္စကို မေ့လိုက်ပါ။
ကျွန်မတို့ ဘယ်တော့မှ တွေ့ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။
စာ – ၂၇၀
(လှပ ဝိုင်းစက်သော်လည်း ခပ်သော့သော့ အနက်ရောင် လက်ရေးများ) စာရွက်ခေါက်ကလေးမှ
“ဂျူး” ဝတ္ထုများကြောင့်၊ မြန်မာ့ အမျိုးသမီးထုအတွင်း လောက်လောက်လားလား စွမ်းရည်နှင့် အမျိုးသမီးများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်ကို ကျွန်တော် လုံးဝ အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ယခုခေတ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော လူငယ် လူလတ်ပိုင်း အမျိုးသမီး တော်တော်များများသည် “ဂျူး” ဩဇာနှင့် သိပ်မကင်းကြဟု ကျွန်တော် ထင်သည်။ တရားသေထင်မြင်ချက်မဟုတ်။ ယေဘုယျသဘောဖြင့်၊ အတော်များများ တွေ့ရဖူးသည်ကို ပြောခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ လွဲကောင်းလွဲနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော် “ဂျူး”၏ ဝတ္ထုအနည်းငယ်ကိုသာ ဖတ်ဖူးပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ မိမိ ထင်မြင်ချက်များဖြင့်သာ၊ ဂျူးကို ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း အကဲခတ်နိုင်စွမ်းသာရှိပါသည်။ ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့ဖူးသလောက်၊ “ဂျူး” ဇာတ်ကောင်များကို “ပညာ၊ မာန နှင့် ကျား / မ စိတ်သဘောဝ တို့ကို ဗဟိုပြုကာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အခင်းအကျင်းများဖြင့် ဇာတ်စုံ ခင်းထားသည်သာ ဖြစ်သည်။”
“ဂျူး” ကို ဖောက်ထွက်သော၊ စာပေ အချင်းအရာ တစ်ရပ်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ တည်ဆောက်ပေးနိုင်သော အမျိုးသမီးဟီးရိုးတစ်ယောက်ဟု ကျွန်တော် အသိအမှတ်ပြုသည်။ “ဂျူး” ဝတ္ထုများ ဖတ်ရင်း၊ အပြုအမူ၊ အထိ အတွေ့၊ တွေးဆချက်၊ ဟန်ပန် အလှုပ်အရှား ဖြစ်တည်မှုများကို ရုပ်လုံးကြွအောင်၊ အသေးစိတ် နက်နက်နဲနဲ ဖော်ညွှန်း ရေးသားနိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို ကျွန်တော် အအံ့ဩအဆုံးဖြစ်သည်။ “ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်” ဝတ္ထု၌ ဤအချက်သည် အလွန်သိသာသည်။
“ဝတ္ထုကောင်းတွေဟာ သိပ်ချစ်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေ ညားလေ့မရှိဘူး။ သိပ်ချစ်တဲ့သူတွေ ဝေးရင်လည်း ဝတ္ထု ကောင်းဖြစ်ဖို့ ပိုများတယ်။” ဘာရယ် မဟုတ်၊ ဂျူး ဝတ္ထုတွေမှာ ခေါင်းထဲ အလိုလိုဝင်လာသည့် အထင်အမြင် တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတွေဆိုတာလည်း၊ ဝေးသွားမှ ပိုပြီး တသသ ဖြစ်ကြတာ မဟုတ်လား…။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဝတ္ထုဆရာတို့က၊ သူတို့ ဝတ္ထုတွေကို စာဖတ်ပရိတ်သတ် တသသ အမြဲရှိနေစေရန်၊ ချစ်သောသူများကို ဝေးကွာ ပေးလိုက်ရခြင်း အကြောင်းပေလား မပြောတတ်ပေ။
တကယ်တော့၊ ဝေးကွာသော အကြောင်းတရားသည် ဝတ္ထုထဲမှာသာ ခံစားလို့ ကောင်းပြီး၊ အပြင်လက်တွေ့၌ အလွန်ဆိုးဝါးသော ခံစားချက်ဖြစ်ပါသည်။ လူတွေက၊ ဝတ္ထုထဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပစ်သွင်းလိုက်ကြရင်ဖြင့် အခုအခံ ကင်းသော လမ်းကြမ်းကို လျှောက်ရသည့်နှယ်၊ လူမှုဆက်ဆံရေးများ ကြမ်းရှ ကုန်ကြရသည်။ ေဩာ်…. လူသား ဘဝဖြစ်တည်မှုသည်၊ ခံစားချက်များဖြင့် လှုပ်ရှားယိမ်းယိုင်နေကြသည် မဟုတ်ပါလား။
ထို့ကြောင့်၊ “စာဖတ်၊ စာရေးတဲ့ မိန်းမသားတွေ ဂျူး ကို မကျော်နိုင်သေးသရွေ့ သူ့ချစ်သူ အမျိုးသားတွေ ဒုက္ခ ကောင်းကောင်းရောက်ရတယ်” လို့ ကျွန်တော် မှတ်ချက်ပေးဖူးသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောသလို၊ စာအုပ် ကို ကျော်ပြီး မြင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ ကျွန်တော်တို့ အားထုတ်ကြရမည် မဟုတ်လား။
ဘာပဲ ပြောပြော၊ မြန်မာ့စာပေလောကတွင် “ဂျူး” လို စာပေသမားတစ်ယောက် ပေါ်ထွက်လာတာ ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းသည်။ အမျိုးသမီးထု အတွက် ပို၍ပင် ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သတင်း မီဒီယာ၊ စာအုပ်တွေ မှ တဆင့် မြန်မာ့ အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရှင်များ နယ်ပယ် ကဏ္ဍအသီးသီးမှ၊ ပေါ်ထွက်လာသည်ကိုလည်း ဝမ်းသာရသည်။ နိုင်ငံရေးလောက၊ စီးပွားရေး လောက၊ ပရဟိတ လောက၊ ပညာရေးလောက၊ စာနယ်ဇင်းလောက၊ စာပေလောက၊ ဆေးပညာလောက၊ လောက… လောက…. လောက အစရှိသည့် နယ်ပယ်အစုံစုံတွင် မြန်မာအဖို့ ရှိထားနေပြီးဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ပြီး ရှိနေအုံးမည်လည်းဖြစ်သည်။
ည ၁၀ နာရီ ၄၂ မိနစ်
၂၀ / ၃ / ၂၀၁၇
ဂျူး ဝတ္ထုများကို အကြေအလည် ခံစားဖတ်ရှုဖူးသူများအကြောင်းတွေးမိရင်း၊ မဝံ့မရဲဖြင့် စာအုပ်ရီဗျူးရေးရခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း…. ဤမျှသာ တတ်စွမ်းသည့်ကို သည်းခံပေးကြပါကုန်။
Tagged Book, Book Review, Ju, Myanmar Book Review
Previous post စာအုပ်ထဲက လူ
Next post လီကွမ်ယုဗေဒ